Ramatoa iray tokony ho 45 taona eo ho eo no nahavita namono ny zanany naterany ny Alahady 3 janoary lasa teo, tao amin'ny Fokontany Ambano, Antsirabe faharoa. Bevohoka ary teraka soamantsara ity ramatoa ity ny alin'ny sabotsy hifoha Alahady teo. Ny maraina nefa dia gaga ny zanany fa nahita vongan-drà teo an-tokontany ary nino fa teraka ny reniny saingy tsy nahita zazakely izy. Nampandre ny manodidina ilay zaza ary nitondra mpitandro filaminana sy mpampivelona ny olona ka teo no nivoahan'ny marina fa teraka tokoa izy, saingy novonoiny ary nariany tao andava-piringa ilay zanany. Rehefa noloarana tao dia voamarina tokoa fa tao ilay zazakely ary lahikely efa tsisy aina intsony izany.
lundi, 04 janvier 2021 21:07
Marovoay : Tratra ambodiomby ireo mpandroba sy mpanolana
Tra-tehak'ireo miaramila avy amin'ny Holafy faha 406 1/RM4 teo am-pandrobana sy fanolanana i Garabavy sy Dada, ny 03 janoary 2021 tokony ho tamin'ny 05 ora sy sasany maraina, tao amin'ny Fokontany Miadana, Kaominina Marovoay. Dahalo rain-dahiny sy mpilalao ody izy ireto ka mbola tratra teny amin'izy ireo ny mohara sy ny basy vita tanana.
samedi, 02 janvier 2021 07:46
Antanifotsy-Vakinankaratra : Nirehitra ny kilasimandrin'ny sekoly katolika
Nitrangana haintrano goavana aty an-drenivohitry ny distrika Antanifotsy, faritra Vakinankaratra ny 1 janoary 2021. Nirehitra ny tranobe kilasimandrin'ny sekoly katolika aty an-toerana. Tany amin'ny rihana ambony no niandoha ny afo. "Court-circuit" na fatana nirehitra hadino no tombanana ho niavian'ny afo. Nalaky niitatra ny afo, saika vita amin'ny hazo rahateo koa ny ao anatin'ny trano. Zara raha nisy entana avotra noho ny herin'ny afo.Naharitra adim-pamantaranandro telo mahery vao lefy ny afo.
“Tonga dia mitondrà zana-bary tse rehefa hidina ihany dia ketsao eny amin’ny arabe”, hoy ny hanihanin’ireo mpampiasa Facebook terak’Alaotra. “Izaho aloha tsy manakivy fa eo Ranofotsy ka hatrany Andilanatoby dia tena tantara be”, hoy indray ny sasany. “Mety ho enjana ny lalana ao ah ! Tavela any ny zandriko marina. Ilay ao Ranofotsy ao mihitsy no tena gravy. Moramanga-Andaingo milamina fa henjakenjana ny Andaingo Vohidiala”, hoy kosa ny hafa. “Midina mahita azy fa raha ny tatitry ny vaovao TVM dia efa toy ny autoroute ny RN 44. Ataovy telo ny pneu de secours entina.”
Toamasina : Mizotra ara-dalàna ny fanamboaran-dalana boulevard Ratsimilaho
Na teo aza ny ranon'orana sy rivotra nentin'ny rivodoza Chalane, dia mizotra ara-dalàna ny fanamboaran-dalana boulevard Ratsimilaho, mampitohy ny lycée Jacques Rabemananjara amin'ny Hôtel Miou Miou Club. Mandeha tsara ny asa, ary tsy nisy nihetsika ireo izay efa vita toy ny remblai ampiakarana haavo ny toerana, satria efa voaaron'ny torapasika avo sy vato lehibe. Marihina moa fa ny orinasa SMATP no miandraikitra ny fanatanterahana ity asa fanamboaran-dalana goavana ity, izay hamerina tanteraka amin'ny lazany ny torapasiky Toamasina, ka azo antoka fa hisarika mpizahatany maro hitsidika an'i Toamasina. Nidina teny an-toerana nijery ny hamafin'ny foto-drafitrasa mihitsy ny Governoran'ny Faritra Atsinanana RAFIDISON Richard Théodore, izay nametraka fanamby ny ahamatihanina ny asa fanamboarana rehetra. (Jereo Sary Tohiny)
Saron’ny Zandary avy ao amin’ny Poste Fixe Besoa Kaominina Analavoka ny lehilahy roa, niaraka tamin’ny vola 20 000 Ariary sandoka miisa efatra. Nentina tao amin’ny Brigady Sakalalina, ary notanana avy hatrany natao fanadihadiana. Voararan’ny lalàna ny fanaovana sy fanaparitahana vola sandoka. Sazy hatramin’ny asa an-terivozona mandram-pahafaty no miandry ny mpanao izany. (Jereo Sary Tohiny)
Dahalo iray no voasambotry ny Zandary avy ao amin’ny Poste Avancé Ilakaka, niaraka tamin’ny omby halatra miisa sivy noroahiny, taorian’ny fampandrenesana azon’izy ireo avy amin'ny sefo Fokontany ao Benahy-1, Kaominina Ilakakabe rehefa nandalo tao amin'io faritra io. Velona ny fanarahan-dia ary koa ny fiambenana ny kizo izay handalovany, ka tamin’izay no nahatratrarana ilay dahalo iray miaraka amin'ireo omby sivy. Avy any Morarano, Kaominina Benenitra ireo omby nangalaran’ilay dahalo ary ny mpiarakandro ireo omby ireo ihany no voalaza fa niray tsikombakomba taminy. Naiditra " fourrière" ao amin'ny Kaominina Ilakaka ireo omby ireo, mitohy ny famotorana ilay dahalo voasambotra. (Jereo Sary Tohiny)
Nivory matetika ny CRCO teto Toamasina, ary nametraka rafitra nanomanana ny handraisana ny mety ho tra-boina ateraky ny rivodoza Chalane. Nony maraina, azo lazaina ho nieren-doza i Toamasina sy ny manodidina satria ankoatra ny fahatapatapahan'ny jiro, sy ny fisian'ny rano niakatra tany amin'ireo kartie efa malaza fa iva, dia teo eo ihany ny fahasimbana. Vao maraina dia nitety ireo toerana maromaro, ny mpikambana amin'ny CRCO Atsinanana notarihin'ny Goverinora RAFIDISON Richard Théodore, ny Préfet RAZAFIARISON Jean Jugus, ny Ben'ny tanána RAKOTONIRINA Nantenaina ary ireo lehiben'ny mpitandro filaminana.
samedi, 26 décembre 2020 18:28
Ambatoroka : Fiaram-panjakana nitrongy andrinjiron’ny Jirama
Fiara tsy mataho-dalana iray, takelaka mena, an'ny fanjakana no nitronga andrinjiron’ny Jirama tetsy Ambatoroka amin’ny lalana hiazo an'Ambohipo, Boriborintany faharoa Antananarivo Renivohitra ; ny atoandron’ity sabotsy 26 desambra 2020 ity. Nitolefika nanindry ilay fiara, sady nanapaka arabe mihitsy ilay andrinjiro, midika fa mafy ny dona.Fandehanana mafy, mpamily nandray alikaola no voalaza fa fototry ny loza. Nitohana fotoana vitsivitsy ny fifamoivoizana tamin’io faritra io. (Jereo Sary Tohiny)
Manao ny ataony hatrany ny mpanao “tsongonofotra” aty Avaratra. Toy ireny avy nifanehatra tamin’ny bibidia masiaka toy ny fahita atsy Afrika ireny ireo omby lasibatra.Endahana amin’ny fomba feno habibiana ny nofon’omby ka ny taolany sy izay tsy ilain’ireo mpanao ratsy sisa no tavela.